Vaovao - Namerina tamin'ny laoniny ny varotra SHWHWA Bulldozer
Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2021, ny varotra bulldozer SHEHWA dia miatrika fahasahiranana maro: ny fiverenan'ny COVID-19, ny fankasitrahana mitohy ny tahan'ny fifanakalozam-bola RMB, ny fihenan'ny tsena ivelany, ny tsy fahampian'ny otrikaina anatiny, sns.
Rehefa miatrika zava-tsarotra maro dia maro, ny departemanta iraisam-pirenena an'ny SHEHWA dia mitazona hatrany ny doka amin'ny tambajotra amin'ny alàlan'ny e-varotra, manandrana mamolavola mpanjifa vaovao, anatiny, mihazona fifandraisana akaiky amin'ireo mpanjifa taloha ary mifantoka amin'ny fanampiana azy ireo hamaha ny olana rehetra mandritra ny fiaraha-miasa. , indrindra ho an'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny toa ny maso i Rosia. Mandritra izany fotoana izany, ny departemanta iraisampirenena dia niara-niasa tamin'ny Sinosure hatrany nanampy ny mpanjifa mpanara-maso hamaha ny olana ara-bola
Amin'ny alàlan'ny ezaka tsy misy fitsaharana, ny fandraharahana any ivelany an'ny Sampan-draharaha Iraisam-pirenena dia mbola nahavita fivoarana lehibe nandritra ny vanim-potoana nisehoan'ny valanaretina: andiam-bolo mitohy hatrany no amidy amin'ny tsena rosiana, ny masoivoho any Ukraine sy Arzantina koa dia nanao sonia baiko vaovao nifandimby, ary mpanjifa vaovao any Tonizia, Algeria ary hafa firenena novolavolaina.
Miaraka amin'ny fandefasana entana, ny varotra SHEHWA any ivelany dia nahatratra ambaratonga vaovao. Ny departemanta iraisam-pirenena dia hanohy hamaha ny olana rehetra ary hanao ezaka mitohy hahatratrarana tanjona lehibe kokoa sy matanjaka kokoa.